နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: ကျွန်တော် ဝယ်သိမ်းထားချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားများ
KTz August 19, 2009 at 2:38 AM
Harry Potter ကတော့ရှိတယ်...စာအုပ်ကော..အခွေကော..
ူlove HP Seriesalot.
We are soldiers လည်းရှိတယ်...
ကိုပေါ August 19, 2009 at 5:03 AM
အင်း... တစ်ကနေ ကိုးအထိ ဇာတ်ကားနာမည်တွေကို ကြည့်လိုက်တော့ ဘွိုင်းဇ်ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့လိုက်စွာ ကလေးစိတ်မကုန်သေးဘူးဟု ကောက်ချက်ချမိတယ်။ မိန်းမ မယူနဲ့ဦး။း-)
ATN August 19, 2009 at 7:37 AM
ကိုဘွိုင်းဇ်က Science Fiction တွေ အတော်ကြိုက်ပုံရတယ်...း)
Unknown August 19, 2009 at 2:37 PM
(ပုံ /ပြန်ငှားရအောင် အသင့်စောင့်နေသူတဦး)
Phyo Maw August 20, 2009 at 10:39 AM
၆၀၀GB အပြည့် ရုပ်ရှင်ချည်း ထည့်ထားဒယ်
Ko Boyz August 20, 2009 at 11:25 AM
ဟိုက်...။ စူ့ထက်စူ လူစွမ်းကောင်းတွေပါလား။
ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ ပိုင်းရိတ်တွေပေါ့။ စလုံး ပိုင်းရိတ် ဥပဒေနဲ့ ငြိနေဦးမယ်နော့...။
maylay August 20, 2009 at 11:37 AM
ကိုကြီး 5.6.7.8.9.16.17.29.တွေကြိုက်တယ် မေလေးလည်း လိုချင်နေတာ။ ဒိမှာက မရှိဘူး အဲလို
jr.lwinoo August 20, 2009 at 11:59 AM
WE WERE SOLDIERS ဟုတ်ဘူးလားရှင့်။
ဒါမှမဟုတ် WE ARE SOLDIERS ဆိုတဲ့ကားရောပဲ ရှိတာများလား။
ဗီယက်နမ် စစ်ကားမဟုတ်လား ကိုဘွိုင်းဇ်ရေ။
Ko Boyz August 20, 2009 at 12:01 PM
ဘန်ကောက်မှာ ရနိုင်တယ် ညီမလေး။
Ko Boyz August 20, 2009 at 12:07 PM
မှန်ပါတယ် ဂျူနီယာရေ့...။ We Were Soliders ပါ။ ပြင်လိုက်ပါမယ်။ ကျေးဇူးပါ။ နောက်ကို သတိရတဲ့ ကားလေးတွေ ထပ် update လုပ်ပါဦးမယ်။ အမှားလေးတွေ လာပြင်ပါနော့။
အမှားများနဲ့ ကျွန်တော် အကောင်းစားလေး
nothing August 20, 2009 at 3:33 PM
Ko Boyz August 20, 2009 at 5:13 PM
- နေရာဒေသကိုလိုက်ပြီး အခေါ်အဝေါ်ကစ ကွာသွားတာပေါ့ဗျာ...။
- ကျိုင်းတုံမှာ ပေါ်လိမ့်မယ်လိမ့်ဆိုတာ သူဌေးတွေ ခေါ်တယ်။
- ကိုမြစ်ဆုံပြောတဲ့ ရှင်လောင်းတွေရဲ့ မွေးစားအဖေအမေတွေ (တိုင်းလျန်အခေါ် ပေါ်လိမ့်) ကြတော့ ကျွန်တော်တို့အရပ်မှာ ပေါ်အောက် (Aouk) မယ်အောက် လို့ ခေါ်ပါတယ်။
- ကလေးလေးကို တစ်ကယ် မွေးစားကြတဲ့ အဖေအမေကိုတော့ ပေါ်ကေ့ပ်မယ်ကေ့ပ် လို့ ခေါ်ပါသတဲ့ဗျား။ (ကေ့ပ်ဆိုတာ ကောက်ယူတာကို ပြောတာ။ ကောက်ယူတဲ့ အဖေ.. ကောက်ရသား အဲလိုဗျာ...။)
smiling flower August 20, 2009 at 7:01 PM
smiling flower August 20, 2009 at 7:06 PM
အပေါ်က ကွန်မန့်က သေချာမကြည့်ပဲ စီဘောက်စ်မတွေ့လို့ ရေးလိုက်မိတာကို ဖျက်ထားတာပါ။
Rita August 21, 2009 at 10:15 PM
Spider Man, Bat Man, Super Man, Harry Potter ကြိုက်တာတော့ တူတယ် ကိုဘ
Linn Zaw Win August 22, 2009 at 11:54 AM
I wonder why you want to buy DVDs and keep. As for me, I just want to download and keep in the harddisk rather than keeping DVDs. DVDs can be damaged, those need space to keep and it's blu-ray age nowadays. I suggest you to buy Rapidshare account and download HD versions instead of buying DVDs. (That might sounds pirated :D ). I have 5,6,8,21,25,29 in HDrip quality and some others in DVDrip quality. Feel free to come and copy from me if you wish. ;)
Ko Boyz August 22, 2009 at 11:57 AM
HDrip တွေ လိုချင်တယ်။
ဘလူးရေးက ပလေယာ မရှိသေးလို့ မသိမ်းချင်တာ။
ဒေါင်းလုပ် လုပ်ဖို့က ဒီနိုင်ငံက ပိုင်းရိတ်ဥပဒေနဲ့ ငြိနေလို့ ဆွဲမချတာပါ...။
လာတော့ အကူးချင်သား..။ ဘယ်ကလဲဗျ ကိုကွန်ပျူတာက...။ :P
Linn Zaw Win August 22, 2009 at 3:15 PM
ကျွန်တော်လား? ခြင်္သေ့ကျွန်းလေးမှာပါပဲ :)
Don't worry much about the copyright case here.
Just avoid torrents and use Rapidshare, Megaupload instead. The gov is not that strictly enforce the copyright act. The biggest case here is Odex Case. I can't keep myself from downloading as long as I want to watch and keep HD movies, play newly released games and use latest software. :D
I've sent you email. Check it. ;)
khin oo may August 30, 2009 at 1:07 AM
လာဖတ်တယ်. သိတ်မကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာမို့လို့ ဘာမှ တော့မပြောတတ်ဘူး။
NSA September 8, 2009 at 2:41 PM
Ko Boyz September 8, 2009 at 2:49 PM
မကြိုက်ရင်လဲ မကြိုက်တဲ့ အကြောင်း ပြောခွင့်ပေးထားပါတယ်။ :P
သားကြီး September 9, 2009 at 4:20 AM
ဘေးအခန်းက အဘိုးကြီးဆုံးသွားကတည်းက လူကအလိုလိုလန့်နေတယ် သရဲကားဖွင့်ကြည့်ဖို့မပြောနဲ့
ကြော်ငြာဝင်တာပါလေ.. သတ္တိကောင်းတဲ့အကြောင်း ဟီးးး
သိင်္ဂါကျော် September 10, 2009 at 4:58 PM
ကြိုက်တာတွေ အများကြီး ပါတယ်...
ကလေးစိတ် မကုန်သေးဘူး ပြောချင်လည်းပြော :D
Mission Imposssible 1,2,3
အများကြီး ကျန်သေးတယ်.. ကိုယ်လည်း စာရင်းလေး ပြန်ပြုစုရင် ကောင်းမလား မသိဘူး.... သရဲကားတွေလည်း ကြိုက်သေးတာ...